Global Voices teny Malagasy » Shina: Mampita ireo vaovao avy any Ejipta · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Mampita ireo vaovao avy any Ejipta
Voadika ny 30 Janoary 2011 17:41 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Ejipta, Shina, GV Mpisolovava
Ny 28 Janoary, rehefa nitondra fanamarihana mikasika ny toe-draharaha ara-politika any Ejipta ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Sinoa dia niteny fa hitohy hanohana ny governemanta Ejiptiana amin'ny fihazonana ny lamina ara-tsosialy ny governemanta Sinoa  ary manohitra ny fijabahan'ny vahiny any Ejipta. Nanomboka teo, ny teny hoe “Ejipta” dia voasakana any anaty lohamilina fikarohana amin'ireo vohikala sosialy malaza rehetra, oty ny Sina sy ny fitorahana bilaogy kiritika Sohu.
Mivandravandra ihany koa fa ny mpamoaka vaovao tantanin'ny fanjakana Sinoa dia manamaivana ilay vaovao. Ohatra fotsiny, tao amin'ny pejy voalohan'ny vaovaon'ny Xinhua androany, sarotra ho an'ny tsirairay ny hahita vaovao mikasika an'i Ejipta na dia hoe ny teny “Ejipta Governemanta Vaovao” aza (natao anaty boribory maitso etsy anaty dikasarin'ny fàfana) mivoaka ho toy ny vaovao mafana.
Ny teny hoe “Ejipta” dia mbola azo karohana ihany amin'ireo fitaovana fikarohana toy ny Baidu. Saingy ny vokatra azo dia mazàna no avy amin'ny vavahadim-tseraseran'ireo mpampita vaovao izay manana ny fomba fanivanan-tena azy manokana. Ohatra, androany ny fikarohana ny teny hoe “Ejipta” miaraka amina vaovao momba ny governemanta Ejiptiana vaovao, sy ny korontana ara-tsosialy ary ny sahotaka. Kanefa ao anatin'ny seha-pifaneraseràn'ny Baidu, ny Baidu Tieba, dia misy lohahevitra iray mahaliana azonao jerena : Ejipta anio no ho ny ampitsonao, jereo ity dikasarina fàfana eto ambany ity:
Mampita ny vaovao
Ny vokatry ny fanivànana sy ny fanakànana ny fikarohana ny teny hoe “Ejipta” any anatin'ireo vohikala media sosialy dia ho fisorohana ny mety ho fandikàna ny toe-draharaha politika any Ejipta. Ny sarin'ireo fiara mifono vy mamakivaky ny tanàna, ny fifandonan'ny vahoaka sy ny tafika dia tena mampahatsiahy an-dry zareo Sinoa ny andron'ny 4 Jona tamin'ny 1989 ary ny fanakianana ny governemanta tsy refesi-mandidy ao Ejipta dia mety hivadika ho sariantsaina ara-politika ho an'i Sina. Ny departemantan'ny fampielezan-kevitra dia tsy maintsy hamoaka sivana ho an'ireo vavahadin-tserasera sy ny vohikala sosialy tsy ho ela, toerana izay iparitahan'ny fanehoan-kevitra amin'ny fomba faran'izay hainga indrindra ka hanjary ho anton-dresaky ny vahoaka ao anatin'ny ora vitsy monja.
Na izany aza, ireo mpitoraka bilaogy kiritika mbola mahita lalana ihany hialana amin'ny sivana sy hampitàna ny vaovao. Maro ireo mpitoraka bilaogy manome fanavaozam-baovao momba ny toe-draharaha ara-politika ao Ejipta amin'ny fandikàna sy fandefasana ny vaovao avoakan'ny Al Jazeera TV ary ireo mpampita vaovao samihafa avy any ivelany. Wang Xiaoshan  dia isan'ny iray amin'ireny fanalahidim-baovao ireny. Ary na dia bahanana any amin'ireo teny fikarohana aza ny hoe “Ejipta”, ireo mafàna fo amin'ny fizarana vaovao dia mahita làlana foana hamoronana kaonty hanelezana vaovao, toy ity livecast momba ny korontana ao Ejipta ity  ao amin'ny Sina Weibo. Ilay kaonty dia ireo Sinoa mianatra any ivelany no namorona azy and io dia mampiseho ny vokatry ny fikarohana ny teny hoe “Ejipta” (jereo ny dikasarin'ny fàfana).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/30/12472/
 hitohy hanohana ny governemanta Ejiptiana amin'ny fihazonana ny lamina ara-tsosialy ny governemanta Sinoa: http://news.sohu.com/20110128/n279129233.shtml
 Wang Xiaoshan: http://t.sina.com.cn/wangxiaoshan
 livecast momba ny korontana ao Ejipta ity: http://t.sina.com.cn/1916783740